Wasiirada Xafiiska Adeega Shacabka Iyo Kobcinta DDSI Ayaa Tababar U Soo Xidhay Xog-hayaasha xafiisyada Heer Deegaan iyo degmooyinka Qaar Kamida. - Cakaara News
Wasiirada Xafiiska Adeega Shacabka Iyo Kobcinta DDSI Ayaa Tababar U Soo Xidhay Xog-hayaasha xafiisyada Heer Deegaan iyo degmooyinka Qaar Kamida.
Jigjiga(CN) Sabti.Jan.31.2015, wasiirada xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta awooda maamulka DDSI marwo Majiida Maxamed ayaa shalay u soo xidhay tababar socday mudo 20 maalmood ah, xoghaynta xafiisyada heer deegaan iyo degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Nogob.
Tababarkaa oo ay ujeedadiisu ahayd in xoghaynta xafiisyada laga siiyo fahan dheer oo ku taxa luqa cilmiga aalada casriga ah ee kombiyuutarka, sida cilad bixinta aalada kombiyuutarka barashada hardware ka,ta Microsoft officeka iyo waliba sida looga ilaaliyo kombiyuutarka laagana saaro virus ka.
Haddaba waxaa xidhitaankii ka hadashay wasiirka adeega shacabka iyo kobcinta maamulka DDSI marwo majiida maxamed maxamuud waxayna si qoto dheer uga hadashay ujeedooyinka iyo ahmiyada uu ku fadhiyo tababarkani.
Wasiiradu iyada oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tidhi” si loo hirgaliyo loogana midho dhaliyo hayaanka horumarineed kuwo dheer dhexe iyo kuwa dhaw Waa in la garawsadaa xafiis kasta oo ah mid dawladeed in uu ku tiirsan yahay aqoonta, xirfada, khabiirada iyo dhiirigelinta cududiisa shaqaale.tababarkan aad mudada 20ka maal mood ah qaadateena waxa uu ka mid yahay mid lagu sii karaar galinayo xawaaraha horumarineed ee ay ku socoto xukuumada DDSI”.
Sidoo kale waxay wasiiradu si mug leh ugu boorisay xubnahan xoghaynta ee loo soo xidhay tababarka in ay u mee ,mariyaan sidii loogu talagalay kana midho dhaliyaan aqoontii ay barteen marka ay ku noqdaan xafiisyadii ay ka socdeen.
Dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay tababarkaasi wasiir ku xigeenka xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta maamulka DDSI mudane Maxamed Xasan isaga oo sharax durugsan ka bixiyay qorshayaasha horumarineed ee uu leeyahay xafiisku gaar ahaan kuwa ku qotoma dhinaca tababarada shaqaalaha dawlada.
Wuxuuna sheegay wasiir ku xigeenku in Shaqaalaha lasiiyay fursado tababar wax tarleh kas oo soconaya waqtig ugu gaaban ee suura galka ah In la hubiyo in shaqaaluhu kor u qaadeen kartida iyo xirfaddooda si ay u awoodaan inay ku shaqeeyaan si sahlan, si degdeg ahna uga jawaaban isbaddallada xafiiska; In ay horumariyaan waxqabadka waajibaadkooda shaqo kuna kulna dar daarmay in ay ka midho dhaliyaan aqoontii ay barteen.
Qaarka mid ah xoghayntan tababarka qaatatay ayaa shegay in ay fahan buuxa ka qaateen mudadii uu socday balan qaadayna in ay sidii loogu tala galay uga midho dhalinayaan marka ay ku noqdaan xafiisyadii ay ka shaqaynayeen.